Ntụle miri emi nke Testosterone Cypionate | AASraw
/blog/gallery/Ntụle miri emi nke Testosterone Cypionate
Ihe na 11 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Na ụwa ebe ndị steroid ji ghọọ ihe na onye ọ bụla na-eji ya eme ihe iji nweta ihe mgbaru ọsọ ha, ọ dị mkpa ka ị mụtakwuo banyere Testosterone Cypionate. Anyị ga-atụle ọtụtụ nkọwa banyere steroid a site na Testosterone usoro onunu ogwu, esi agba Testosterone, esi emeso Testosterone overdose, Testosterone Cypionate reviews n'etiti ndị ọzọ. Ihe niile ị ga - eme bụ ịnọdụ ala ka anyị banye n'ụwa nke Testosterone Cypionate.
Na-eche banyere ebe kacha mma zụta Testosterone Cypionate online? AASraw.com bụ ezigbo nhọrọ. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke na-ahụ maka ịmepụta, ahịa, na nkesa nke ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ na ngwaahịa gụnyere Testosterone Cypionate.
Ntre nso ke cypionate testosterone?
testosterone bụ steroid nke anabolic nke bụ nke mbụ a ga-emepụta na ahịa. N'aka nke ọzọ, Testosterone Cypionate bụ onyinye Testosterone nke na-eme nwayọ, onye dị ogologo na mmanụ na-injectable. A na-eji ya agwọ ọrịa hypogonadism nke na-adịghị ahụ na Testosterone na ahụ nke na-akpata nsogbu dịgasị iche dị na ụmụ nwoke.
Ịbụ ọgwụ ọgwụ, ị nwere ike inye ya onwe gị na nkasi obi nke ụlọ gị mgbe otu dọkịta gwara gị otu esi eme ya. Ọfọn na ọ bụ onwe-injectable, nke a na-eme ka ọ dị mfe iji. A pụkwara inweta ya n'ụdị ya.
testosterone bu nke mbụ emere na 1935, mgbe afọ abụọ gasịrị, a tọhapụrụ ya ahịa dị ka ọgwụ ọgwụ. Na mbụ, ọ dị na ụdị pellets ma mesịa dị n'ụdị ester nke bụ intramuscular ogwu dị ka Testosterone Cypionate.
Methyltestosterone, bụ otu n'ime ndị mbụ anabolic steroid nke a ga-emepụta na wepụtara na 1935. O di nwute, a jikọtara ya na hepatotoxicity, ma n'ihi nke a, ọ malitere ịmalite. A na-emepụta testosterone esters ogologo oge Testosterone Cypionate n'ahịa dị n'etiti 1950s site na ụlọ ọrụ a na-akpọ Upjohn. Na mbụ, e rere ya n'aha Depo-Testosterone ma ka na-ewu ewu n'otu aha ahụ.
Upjohn etinyewo aka na mmepụta nke Depo-Testosterone kemgbe afọ iri ise gara aga kemgbe ọ malitere oru. Testosterone Cypionate bụ ọkachamara na Testosterone enanthate site na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu. Ha abụọ yiri nke ahụ, mana ọkara ha dị iche.
Testosterone Cypionate so n'ime ndị na-arịa ọrịa anabolic nke nwetara nkwenye ka a jiri ya mee dị ka ọgwụ ọgwụ na 1970s. Mgbe ahụ, FDA na-akọwa ya naanị iji mee ka ọgwụgwọ na-emechi ọgwụgwọ Testosterone. Kemgbe ọtụtụ afọ, ejirila ya mee ihe ebe ọ bụ na ọ gaghị adabara maka ụmụaka na ụmụ nwanyị. A na-agafe ọgwụ na Testosterone cypionate dị ka ọgwụ nwoke na-achịkwa nwa mgbe e were ya na 200mg kwa izu.
Kedu ihe cypionate testosterone ji mee?
testosterone Cypionate nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe na ndụ anyị. Lee ya ngwa.
N'ime ụwa dị mma, onye ọ bụla na-agbalịsi ike ịbụ onye kachasị mma. Ma ị bụ onye dị elu ma ọ bụ onye na-egwu egwuregwu, ị ga-aghọta na mgbe ụfọdụ, asọmpi nwere ike iwe ọkụ. Ndị ọzọ karịa afọ ojuju nke na-abịa na-emeri, na-enye mmeri ma ọ bụ ịchekwa ntụpọ na otu ọkachamara bụ ihe kacha achọsi ike maka ọtụtụ. Ime ihe ndị dị otú ahụ na ndụ gị nwere ike iri afọ ma ọ bụ karịa dabere na ahụ gị. Mana ozi ọma ahụ bụ ọgwụ na-eme ka ọrụ dị ka Testosterone Cypionate nwere ike ime ka ị rụzuo ihe mgbaru ọsọ gị.
Ntak emi ọgwụ a na-eme ka ahụ dị mma? Ha na-eme ka akwara buru ibu ma n'otu oge ahụ na-eme ka ị gbakee ngwa ngwa site na mgbatị siri ike site na belata ụdị mmebi ahụ nke na-eme n'oge ọmụmụ. Ihe dị na nke a bụ na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịmalite ịmị ike ma na-enweghi mgbe ọ bụla.
Testosterone Cypionate na enyere aka n'igide ogo na ike. Ọ na-emekwa ka ike na njiri dị ike. Ihe ọzọ dị oke mkpa bụ na ị ga-achọsi ike mgbe niile maka ọzụzụ gị ebe ọ bụ na ọgwụ a ga-emeziwanye ma mee ka mgbatị gị sie ike.
Testosterone Cypionate na-akwalite ụda ọnwụ site na mma nke ọrụ metabolic. Onye na-agwọ ọrịa a nwere ike ime nke a site na ijide onye na-enweta androg na-enweta ngwa ngwa na nke a na-akpata nkwụsị nke abụba na igbochi nhazi sel ọhụrụ.
Ọ na-emekwa ka arụmọrụ dị mma n'ahụ. Ọ na-eme ka ahụ sie ike ngwa ngwa otú ahụ ka ị na-erikwu ihe oriri ị na-eri iji zụlite akwara karịa ịchekwa ya dika abụba.
A na-eji Testosterone Cypionate mee ihe na ọgwụgwọ na-agbanwe ọgwụ na androgen. Ugbu a, FDA kwadoro maka ọgwụgwọ hypogonadotropic na isi hypogonadism (ma ọ bụ azụ ma ọ bụ nke nwere nkwarụ). Ọnọdụ a bụ nsogbu nke ụmụ nwoke na-enweghị ike ịmịpụta hormone ọgwụ na Testosterone. Kedu ihe dị iche n'etiti abụọ ahụ?
Hypogonadotropic hypogonadism- Ọ na-ewere ọnọdụ mgbe akụkụ ụfọdụ nke ụbụrụ (pituitary gland ma ọ bụ hypothalamus) nke na-akpakọrịta na testicles na mgbe mepụta testosterone na-abawanye.
Kedu ihe nandrolone ntụ ntụ ji / nandrolone uru?
Mkpụrụ ụbụrụ hypogonadism nke mbụ - Ọ na-eme mgbe testicles enweghị ike ịmịpụta testosterone zuru ezu.
Mgbe mmadụ na-ata ahụhụ site na nke a ọ na-enweta; obere na-adọkpụ, nrụrụ erectile (nsogbu na-enweta na ịnọgide na-erekwa ere), ịda ogbenye na mgbanwe ọnọdụ uche. O nwekwara ike iduga anaemia, mgbu nke akwara na ntutu ahụ, gynecomastia (mmepe nke ara) na ibelata nke uto nke ule na akwukwo. Otú ọ dị, ọ dịghị ka edozi nchekwa ya na ịgwọ ọrịa mbido na-eme ka ndị mmadụ ghara ịdị na-agwọ ọrịa.
Ọzọkwa, a na-eji ya agwọ ọrịa osteoporosis, ọgwụ mgbanwo ọbara na transgender ụmụ nwoke, oligospermia (inwe ọnụ ọgụgụ dị ala), egbu oge nwa nwoke, ọrịa ara, na ọrịa ara ara.
Kedu ka ọrụ cypionate testosterone si eme?
Testosterone Cypionate bụ otu n'ime androgens na-ejide onwe ya. Ọ na-enye aka na nchebe nke njirimara mmekọahụ abụọ. Ha na-agụnye ịba nkata, mgbanwe n'ime nsị ahụ, ụkọ olu, ịkwa ụba laryngeal, na ogo prostate na maturation.
Ọgwụ a nwere otu ihe ndị dị ka Testosterone, ma uru bụ na ọ nwere ogologo ndụ na ntọhapụ ọnụego. N'ime awa 24 nke nchịkwa ya, ọ na - eme ka ọkwa testosterone dị elu ruo na 400%. Ụdị etrogen ahụ nwere ike ịdị elu maka ụbọchị atọ ma ọ bụ ụbọchị ise mgbe ọ gasịrị nlekọta ya. Ozugbo e nwegasịrị usoro ọgwụgwọ nke ọgwụ a, ọ nwere ike ime ka ụfụ na ebe ọkpụkpụ na-agbanwe na libido na ọnọdụ.
Testosterone Cypionate na-arụ ọrụ n'ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ site na ntọghata na estradiol mgbe e mechara ụfọdụ ndị na-anabata estrogen. Ọ na-arụ ọrụ site na androgen receptor activation.
Ọ bụ onye anabolic nke a na-ahụ anya nke mere na ọ bụ abụba soluble na abụba. A na-enye Testosterone na ndị esters ya site na ogwu ogwu ebe ọ bụ na imeju ha anaghị eme ngwa ngwa mgbe e nyere ha ọnụ.
Ozugbo e nwere ọgwụ nchịkwa nke ọgwụ a, oke nkesa ya dị gburugburu 1 L / kg.
Ihe nchekwa protein
Mgbe mgbu ahụ na-ewere ọnọdụ, ọgwụ ahụ na-abanye n'ọbara ka a hazie ya. Mgbe a gbanwere ya, 40% nke ya na - ejikọta plasma globulin mgbe 2% nke ya na - ahapụghị ma ọ bụ na - ejikọta ya na protein ndị ọzọ gụnyere albumin.
Maka ọgwụ a ka ịmalite ịrụ ọrụ, ọ ga-ebugharị ya site na enzymes. Ọrụ nke kpalitere bụ imebi njikọ dị n'etiti Testosterone na ester akụkụ nke igwe mole a. Testosterone Cypionate nwere oge nhazi oge karịa n'ihi nnukwu nke ester ya. Ozugbo nkewa ahụ dị, testosterone gbajiri n'ime 17 ketosteroids. A na-eme ya site na abụọ, n'adịghị ka ụzọ. Dihydrotestosterone na estradiol bụ ndị na-arụ ọrụ metabolite. A na-agbaji Testosterone n'ime DHT na urogenital tract, imeju, na akpụkpọ ahụ. Dihydrotestosterone na-agbadakwa n'ime androstanediol.
90% nke mkpụrụedemede testosterone nke e nyere intramuscularly na-ekpochapụ n'ime urine ahụ n'ụdị nke glucuronic, testosterone sulfuric acid conjugates na metabolites. A na-ekpochapụ 6% nke testosterone fọdụrụnụ site na nhụjuanya n'ozuzu na-adịghị mma.
The Testosterone Cypionate ọkara ndụ bụ otu n'ime ogologo oge ebe ọ bụ ihe dị ka ụbọchị asatọ.
Isi ihe maka testosterone cypionate
A na-eji Testosterone Cypionate mee ihe n'ịgwọ ihe ịrịba ama nke hypogonadism n'ime ụmụ nwoke. Ọnọdụ a na-eme site na ahụ adịghị enwe ike ịmepụta hormone sex testosterone zuru ezu.
Testosterone Cypionate dị n'ụdị nke ngwọta nke dị injectable. A ghaghị ịnye ya na ahụ ike, ihe kachasị mma maka ya bụ na ị nwere ike ime ya n'onwe gị na nkasi obi nke ụlọ gị mgbe ị kwusịrị otú ị ga-esi mee ya na dọkịta gị.
A na-enye ọgwụgwọ Testosterone Cypionate ka ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ na ọgwụ aha. Aha aha bụ Depo-testosterone.
Mmetụta nke cypionate testosterone maka ozubu
Onye ọ bụla nke ji Testosterone Cypionate nwere ike ịgba akaebe maka nsonaazụ dị egwu ọ na-enye ahụ. Ike ya emewo ka a gụọ ya dị ka ndị na-ahụ maka steroid kachasị elu n'ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-enye ngwa ngwa ma dị egwu.
Ozugbo i jiri ya mee izu iri na abụọ, ị ga - enwe;
Ịba ụba abụba nwere ike. Ọ bụ site na mkpochapụ nke estrogen.
Ọ na-edozi ahụ ike ngwa ngwa site n'iji ọrụ satellite satịpụ.
Site na njide nitrogen, ọ na-enye gị nnukwu ahụ ike uru.
Testosterone Cypionate na-emekwa ka ike gwụ gị.
Ọzọkwa, Testosterone na-egbochi mmetụta nke homonụ ndị ọzọ nwere ike ime ka ọkpụkpụ ahụ ghara ịdị na-egbu oge.
Akụkụ nke mmetụta nke cypionate testosterone
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọgwụ a anaghị akpata ụra. Dịka ị nwere ike ịta ahụhụ na mmetụta Testosterone Cypionate, ozi ọma ahụ bụ na ha nwere ike ijikwa.
Ihe mmetụta kachasị emetụta bụ;
Ihe otutu- Njikere nke Testosterone Cypionate nwere ike ime ka ọkpụkpụ. O nwere ike ịbụ nsogbu, ma ị ga-ahụ eziokwu na nrịanrịa dị irè dị. Ngwọta ndị dị n'elu dị ka glycolic acid, benzoyl peroxide, na salicylic acid bụ ndị kachasị mma maka ọgwụgwọ nke mikpo dị nwayọọ ma dị oke. I kwesịkwara ịnọgide na-edebe ọcha na ihu ọma dị mma iji mee ka akpụkpọ ahụ doo anya karị.
Ntutu ntutu- N'iji ọgwụ a nwere ike ime ka ntutu na ntutu na mpaghara ndị a na-atụghị anya ya. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ịnwe oke ma ọ bụ ntutu ihu, enwere ike ị belata ya. Nke mbụ bụ site na ịcha ntutu site na iji shaver eletrik ma ọ bụ agụba. Ọ bụrụ na ntutu a na-enyekarị gị ọkụ ọkụ, ị nwere ike ịzụta ịzụrụ ude na-atọ ụtọ.
I nwere ike na-agbanye ma ọ bụ na-achọ iji wepụ ntutu si na mgbọrọgwụ. Egwuregwu bụ ụzọ ọzọ dị mfe isi kpochapụ ntutu site na mgbọrọgwụ. Iji ọgwụ siri ike a maara dị ka ndapụta ihe nwere ike inyere gị aka nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ị nwere anụ ahụ, ị ​​ga-anwale ya n'otu obere ebe. Ụzọ ndị ọzọ ị ga - esi gbochie ntutu isi bụ site na iji ọgwụ, ịchapu isi na laser, na electrolysis.
Mgbu na ihe mgbu na saịtị ogwugwu - I ghaghị inwe nsogbu naanị n'ihi na ị na-ata ahụhụ ma ọ bụ ọzịza na saịtị ịgbawa. Ọ bụrụ na ịnwewo egbe n'ihu, ị nwere ike ikwuworị na ọrịa ahụ dị njọ ma ọ bụrụ na ọ na-anọ ruo ụbọchị ole na ole. Iji belata nke a, jide n'aka na ị na-akwagharị ebe a. Ọ bụrụ na ị nọgide na-enweghị nchegharị, mpaghara ahụ nwere ike ịfụkwuo ọzọ. Iji mee ka mgbu ahụ nwee ike ịnwe ike, ịnwere ike ịtụle ịṅụ ihe mgbu na-enyere gị aka na mgbu na ọzịza. Ụzọ ọzọ dị mma isi mesoo nke a bụ site n'ichegharị ọkụ na-ekpo ọkụ n'ebe a na-enyefe ya. Otú ọ dị, ị ga - achọ dọkịta ozugbo ị hụrụ na ihe mgbu ma ọ bụ ọzịza adịghị agbanye n'ime oge 48.
Gynecomastia (ịmụba nke ara) - Ị nwere ike chọpụta na obi gị na-aghọ nnukwu mgbe o jiri ọgwụ a. Nke a ekwesịghị ichegbu gị nke ukwuu; ndụmọdụ ndị na-esonụ ga-abịa n'aka. Nke mbụ na-eji mkpịsị edemede. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya ebe ọ bụ na ọ dị mfe na obere akpa ma belata ọdịdị nke ara ahụ n'ụzọ dị irè. Ị nwekwara ike ịnwale ụfọdụ mmemme gynecomastia dịka ọzụzụ ọzụzụ oge dị elu (HIIT), ntinye aka, ọkụ ọkụ na-acha ọkụ, na ọdụ. Iji belata ọdịdị nke ara ara, ị kwesịrị ịgbalịsi ike ịzụlite ahụ ike. Ọ ga-eme ka akamba buru ibu dị ka obere. Ma n'ihi na abụba na-akwalite mmịnye, ị kwesịrị izere nri ndị nwere abụba ma rie abụba ndị dị mma dịka tomato, elu akwụkwọ, azụ abụba na poteto dị ụtọ. Ụzọ ọzọ ị ga-esi gbochie gynecomastia bụ ịwa ahụ nke ga-ewepu abụba dị n'ime obi.
Ihe ndi ozo na-eme mgbe nile - Inwe mmeputa bu ihe kwesiri ma inwe ihe ndi a choro achoro nwere ike buru ihe ojoo. O kwesịghị igbochi gị iji Testosterone Cypionate. Ị nwere ike ịme ihe ọ bụla na-adịghị mma. Site ugbu a, ị na-ajụ onwe gị gbasara otu esi eme ya. Ozugbo ọ mere, ị gaghị eche ka ụwa na-etipịa gị; nọdụ ala, jiri nwayọọ nwayọọ na-adị jụụ ma nọrọ jụụ. Iji belata mmechuihu nke na-abịa na ya, ịnwere ike ikpuchi nrụpụta ahụ site na iji laptọọpụ, uwe ma ọ bụ jaket. Ọ dịghị mkpa ka obi jọọ gị njọ, onye ọ bụla na-ahụ nke a, ma eleghị anya ọ dịghị onye maara na ị nwere otu. Ị nwekwara ike ịtụgharị uche, gbalịa ma dọpụ onwe gị, were mmiri mmiri oyi, nwee mmiri ọkụ ma ọ bụ nwee mmemme dị nro dịka nchịkọta. Otú ọ dị, a tụrụ aro na ọ bụrụ na mmepụta ahụ na-egbu mgbu, ị kwesịrị ịchọ onye dọkịta.
Ihe arụ nke na-adịru ogologo karịa nke mbụ- Ọdịdị nke nwere awa anọ ma ọ bụ karịa abụghị ihe. Testosterone Cypionate nwere ike ime ka nke a, ma ị nwere ike ịnagide nke a site n'itinye ngwugwu ice na mpaghara ahụ. Na nke a, nnukwu ụlọ ere nwere ike ịla n'otu minit. Onye dọkịta nwere ike ịnye gị ọgwụ ma ọ bụ injections iji mee ya.
A isi ọwụwa- A pụrụ isi na isi isi ọwụwa site na iji Testosterone Cypionate. O nwere ike isiri gị ike ịrụ ọrụ, ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ mkparịta ụka gị na-enwe isi ụfụ ma ị nwere ike ime karịa karịa na-ehi ụra ma chere ka ọ gaa na ya. Ị nwere ike gbalịa ịnya mgbu na-emetụta ihe dị ka aspirin, naproxen, ibuprofen, na acetaminophen. I nwekwara ike iji ntuziaka ndị a iji nagide nsogbu ahụ. Mechie anya gị ma zuru ike. Ị nwekwara ike ịhịa aka na ụlọ gị na olu gị. Ọ dịkwa mma ka ị kwụsie ike ma gbalịa ịgbanye akwa akwa ma ọ bụ ihe mgbochi kpo oku gburugburu isi okpuru na n'olu. Chọọ ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ihe mgbu ahụ na-aga n'ihu.
Mgbanwe ihu igwe- Mgbe ụfọdụ ị nwere ike iche na ịchọrọ iji ụbọchị gị naanị n'ụbọchị ndị ọzọ, ị nwere ike inwe obi ụtọ. Ọ dị njọ ma ọ bụrụhaala na ọ dịghị emetụta ihe ị na-eme kwa ụbọchị. N'aka nke ọzọ, mgbanwe mgbanwe ọnọdụ uche nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ihe adịghị mma. Testosterone nwere ike ime ka nke a ma ọ bụrụ na ọ na-eme, ime ya bụ ọnyà. Ọ bụrụ na ị na-emega ahụ mgbe niile, ị ga-achọpụta na ime ya na-ebuli ọnọdụ gị nso ozugbo. Iri nri iri nri abụghị nanị ihe dị oké egwu maka ahụ ike gị, mana ọ bara uru iji meziwanye ọnọdụ gị. Ọ ga-adị gị mkpa ịme ntụrụndụ site na itinye aka na omume ndị dị nro dịka ntụgharị uche na yoga. Gwa dọkịta ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka mmetụ nke ọnọdụ gị na-ewere ndụ gị.
Mbelata nke mkpụrụ ndụ mmadụ mgbe ọ na-eji ọgwụ eme ihe na akwa doses- Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ịlụ di ma ọ bụ nwunye gị n'ihi na ị na-eji Testosterone Cypionate ị nwere ike ịnweta ọgwụgwọ ọgwụ na ọgwụ iji dozie nke a. Karịa nke ahụ, ị ​​nwekwara ike iji usoro nkà na ụzụ na-enyere aka (ART). Ọ bụrụ na ọgwụgwọ yiri ka ọ bụ ihe efu, ị nwere ike ịba ụba ugboro ole ị na-enwe mmekọahụ ma ọ bụ nwee mmekọahụ mgbe njikọta spam nwere ike ime. Izere ndị lubricants nke nwere ike igbochi usoro mkpanaka ahụ bụ ụzọ kachasị mma maka ijikwa nke a.
Ọ bụrụ na mmetụta ndị a nile dị nwayọọ, mgbe ahụ, a na-atụ anya na ha ga-aga ebe ha nwere mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị ma ọ bụ izu abụọ. Ọ bụrụ na anaghị eme, gwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị.
Mmetụta dị egwu
Ndị a bụ mmetụta siri ike a kwesịrị iji kpọrọ ihe. Ozugbo ị hụrụ otu n'ime mgbaàmà ndị a, kpọọ dọkịta gị ozugbo. Rịọ maka enyemaka ozugbo mgbe ị na-eche na mgbaàmà ahụ na-eyi ndụ egwu ma ọ bụrụ na i chere na ha bụ mberede ahụike. Lee mmetụta na mgbaàmà ndị ị kwesịrị ịchọrọ anya;
Mgbu obi - Iji mara na ị na-ata ahụhụ site na otu, ị nwere ike ịhụ na ị nwere ihe ndị a; erughị ala n'ahụ gị, ume mkpụmkpụ, na obi mgbu.
Dịba na nha prostate gland. Ọ bụ mgbaàmà nke; enweghi ike iwepu eriri afo, na-agbasi ike mgbe ịchọrọ ịmalite, inwe mmiri mimi na-adịghị ike ma ọ bụ onye kwụsịrị ma malitegharia na nsogbu ịmalite ịbanye. Ihe ịrịba ama ọzọ bụ nocturia (mmetụta nke ịmịkwuo elu n'abalị) na mkpa dị ngwa na ịchọta.
Ihe ojoo - Okwu nwere ike ime ka ọ pụta ìhè nakwa na ọ na-adịghị ike n'otu akụkụ ahụ.
Ọrịa cancer ụbụrụ- Dọkịta gị kwesịrị ịlele nsogbu ọ bụla nke prostate gọọmentị na n'oge ọgwụgwọ na Testosterone Cypionate karịsịa ma ọ bụrụ na ị dị afọ iri isii na ise ma ọ bụ karịa.
Nsogbu imeju - Ọ nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà site na-acha odo odo nke anya ma ọ bụ akpụkpọ ahụ, enwe mmiri na-acha ọbara ọbara, agụụ na-agụ, ike ọgwụgwụ pụrụ iche, akpọrọ akpụkpọ acha, na-eme ka ọnyá na-adị mfe karịa ka ọ na-eme na ọkpụkpụ ụkwụ na ụkwụ. Ị nwekwara ike ịnweta ụba ikuku na mgbu, ịme agbọ na ọgbụgbọ.
Polycythemia- Nke a bụ ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ọbara ọbara ọbara. Ihe ịrịba ama ya bụ; ọnụ ọgụgụ dị na nche echiche, ike ọgwụgwụ, mkpịsị ọbara, ọrịa strok, mgbagwoju anya, isi ọwụwa na reddening nke ihu.
Ihe mgbakwasị ụkwụ nke Pulmonary- Nke a bụ ịmịnye mkpịsị ọbara na ngụgụ. Ihe ịrịba ama ya na-agba ụfụ ọbara, ngwa ngwa ngwa ngwa, na-enwe mmetụta dị egwu ma ọ bụ na-egbuke egbuke, nkwarụ, nkasi obi obi ma ọ bụ ihe mgbu nke na-aba uru ma ọ bụrụ na i nwee ume miri emi na mkpụmkpụ ume.
Ngwurugwu dị omimi - Ọkpụkpụ ọbara na eriri ụkwụ gị ụkwụ na-egosipụta ihe mgbu na ọzịza nke ụkwụ gị.
Na onunu ogwu nke testosterone cypionate
Ọ bụ ihe ụfọdụ kpatara mmetụta dị na Testosterone cypionate dosage. Ndị a bụ;
Ọnọdụ a na-emeso ya.
Lee ka ọnọdụ ahụ si dị njọ
Ọrịa ndị ọzọ ị nwere ike inwe
Kedu otu ahụ ga-esi meghachi omume na nke mbụ
Ụdị ọgwụ ọjọọ na ike
E nwere ụdị abụọ nke Testosterone Cypionate nke mbụ bụ ụdị mkpụrụ ndụ. Ọ bụ ngwọta injectable na ike nke 100mg / ml na 200mg / ml.
Nke abụọ bụ ụdị Depo-testosterone nke dịkwa na ụdị injectable. Ọ dị na 100mg / ml na 200mg / ml.
Ọgwụgwọ maka hypogonadism bụ isi
Ụdị usoro ọgwụgwọ nke dọkịta ga-ede ga-adabere na nyocha gị na afọ. Dabere na mkpa gị dọkịta nwere ike ịmara nke usoro ọgwụgwọ kacha mma maka gị. Ọ nwere ike ịnye ọgwụ nke 50-400 mg maka izu 2-4 niile.
Ọganihu na-abawanye ụba - dọkịta gị nwere ike ịdọ aka ná ntị ka ị nweta ọganihu ụbụrụ dabere na nzaghachi gị na ọgwụgwọ, testosterone ọkwa ọbara na mmetụta ndị ọzọ.
Ọgwụ kachasị na ọgwụ a bụ ọgwụ 400 n'ime ọgwụ ahụ kwa izu abụọ.
Ngwá ụmụaka (12-17 afọ)
Ụdị ịmalite usoro ọgwụgwọ - Dọkịta gị ga-akọwa nhazi ụbụrụ nwa gị dabere na nyocha ya na afọ ya. Ọ ga-enye ndenye ọgwụ dịka mkpa gị. N'ozuzu, ọ nwere ike ịkwado ọgwụ ogwu 50-400 mg n'ime obere ahụ gị dị n'ime izu abụọ ọ bụla ruo izu anọ.
Ọganihu na-arịwanye elu - Ọkaakaa nwere ike ikpebi ime ka nwa gị gbakee dabere na mmetụta ha, mmeghachi omume na ọgwụgwọ na testosterone ọkwa ọbara.
Ogwu kachasị ka a ga-etinye n'ime akwara nwa gị ga-abụ 400 mg maka izu abụọ ọ bụla.
Ngwá ụmụaka (0-11 afọ)
Enyochabeghị nchekwa na arụmọrụ nke ụmụaka a n'okpuru afọ iri na abụọ abanyebeghị.
Ọgwụgwọ maka ọgwụgwọ hypogonadotropic hypogonadism
Ogwu ogo mmadu (18 afọ na n'elu)
Ụdị usoro ịmalite ọgwụ- Ọgwụgwọ gị dịgasị iche dị ka nyocha gị na afọ gị. Dọkịta ahụ nwere ike ikpebi usoro onyonyo dabere na mkpa gị. Ngwurugwu nke 50-400mg nkedo n'ime ahụ ike kwa izu abụọ.
Ọganihu na-abawanye uru - Ọka dọkịta nwere ike ịdọ aka ná ntị maka mmụba na usoro onyonyo dabere na mmetụta ndị dị n'akụkụ, nzaghachi nye ọgwụgwọ na testosterone ọkwa ọbara.
Otu kachasị ọgwụgwọ nke ọgwụ 400 mg n'ime ahụ gị kwa izu abụọ.
Ụdị usoro ịmị mkpụrụ-Ọgwụ nke nwa gị na-adabere na nchoputa na afọ ha. Dọkịta kpebiri na nke a dabere na mkpa nke nwa gị. N'ozuzu, usoro onunu ogwu kwesiri ibu ihe ogwu 50-400 mg n'ime muscle mgbe obula izu 2-4.
Ọganihu na-abawanye-Ọgwụgwọ nwa gị nwere ike gbanwee dị ka mmetụta ndị ha na-enweta, nzaghachi ha na ọgwụgwọ na testosterone ọkwa ọbara.
Ogwu kachasị edozi n'ime akwara nwa gị kwesịrị ịbụ 400mg maka izu abụọ ọ bụla.
Enweghi ike ikwenye ma ọgwụ a ọ dị mma ma ọ bụ rụọ ọrụ nke oma maka ụmụaka ndị na-erughị afọ iri na abụọ.
Ọ bụrụ na ị na-eji ya iji wuo ahụ ike ịrụ ọrụ egwuregwu, usoro ọgwụ nke 100-200 mg nke ọgwụ a kwa izu ezuola. Mgbe izu anọ gasịrị, ịnwere ike iweli onyonyo dabere na nsonaazụ ndị ị nwetara na ahụ gị ma ọ bụ dịka otu ahụ si arụ ọrụ iji ọgwụ ahụ eme ihe.
Na mgbe nile, a na-eji cypionate testosterone iji gbochie mmetụta T-level nke ndị ọzọ steroid na onye ahụ nwere ike na-ewere. Mgbe e jiri ya mee ihe, Testosterone Cypionate 200mg-400mg bụ dose.
Mgbanwe nke testosterone cypionate
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnara Testosterone Cypionate injections na nke onwe ha na ebumnuche nke ịsaba abụba na ịzụ ụlọ ahụ, usoro ịkpụzi gị kwesịrị ịdị ka nke a:
Nario Cyto Cypriot na Testosterone kwesịrị ịbụ 200mg kwa izu site na izu 1 ruo izu iri na abụọ. Otú ọ dị, ị ga-achọpụta na ọ bụrụ na ị na-etinye Testosterone Cypionate na steroid ọ bụla ọzọ, ọ ga-agbanwe. Ntak emi?
Onye ọ bụla steroid nwere ọkara dị iche iche. Ị ga-atụle nke a tupu ị kpebie ịtụkọta ụfọdụ steroid. Nakwa, ị kwesịrị ịkpachara anya ka ị na-amalite usoro nkwụsịtụ n'ihi na ị maghị otú ahụ gị ga-esi mee ihe karịrị otu steroid. Iji zere nsogbu jide n'aka na ị na-anwale ihe ọ bụla steroid nyere onwe ya. I nwekwara ike izere nke ahụ ma jiri otu steroid n'oge.
Ọgwụgwọ usoro mgbanwe
Usoro ọgwụgwọ a dị mkpa dị ka ịdọrọ steroid n'onwe ha. Ọ bụ n'ihi na, mgbe ị na-eji Testosterone Cypionate, a na-egbochi ike nke ahụ gị ịmepụta hormone a ugbu a. Mgbe emechara gị na nsụgharị Testosterone, estrogen ga-ejupụta ahụ gị. Ọ bụ n'ihi na ahụ gị na-adabere na injections iji mepụta testosterone na ya n'ihi ya, testes nwere ike na-enweghị ihe ọ bụla.
Ịdọ aka ná ntị cypionate Testosterone
Tupu i jiri ọgwụ a, ị ga-achọ ịma ihe nwere ike ime n'ahụ gị. Ọ nwere ike ịkpata ọrịa hyperkalcemia na ndị ọrịa na-adịghị ala. Ọ bụrụ na nke a emee, ịkwesịrị ịkwụsị iji ọgwụ ahụ eme ihe ozugbo.
Zere ịṅụ ọgwụ a ogologo oge n'ihi na ọ nwere ike ime ka nsogbu dị egwu dị ka peliosis hepatis, hepatocellular carcinoma, na ọrịa hepatic adenomas.
Ọ bụ ezie na ekwenyebeghị ya, a na-adọ ndị ọrịa geriatric aka ná ntị megide iji ọgwụ a eme ihe n'ihi na ọ nwere ike ibute carcinoma prostatic na hypertrophy prostatic.
Testosterone Cypionate nwere ike ime ka ihe ọkpụkpụ thromboembolic na-eri na-enwe ike ịpụta ihe site na mkpụmkpụ ume, edema, na mgbu. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nke a, kwụsịnụ jiri ọgwụ na-emeso ọnọdụ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Maka ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ nwere ike ibute ọrịa uche siri ike na mmeghachi omume obi. Ebe ọ bụ na ọ na-akpata Edema, ọ nwere ike ibute ndị mmadụ nwere ọrịa hepatic dị ugbu a, ọrịa akwara na ọrịa obi. Gynecomastia nwekwara ike ịzụlite.
Aṅụ mmanya benzyl na-eme ka ọ bụrụ onye nchebe na-eduga ná nsogbu dị njọ dị ka ọrịa gasping. Na obere ego, ọ nwere ike ọ gaghị emetụta gị. Ọzọkwa, maka ndị nwere ahụ ike bụ ndị nwatakịrịla ogo oge na-etolite nwere ike ịnwụ site n'ịdị elu. Ọ bụ n'ihi na ọ na-emetụta ụda ọkpụkpụ.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na anaghị m echefu ọgwụ ma ọ bụ ịgbagha
Testosterone Cypionate injections bụ ọgwụgwọ ogologo oge ma nwee ike, ya mere, na-akpata mmetụta dị ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ghara ịnara ya ma ọ nwere ike ibute ọgwụ anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ihe kpatara ya bụ iji ọgwụ ọjọọ rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, otu ego kwesịrị ịdị na ahụ gị n'oge niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ọgwụ a, ị nwere ike ịnwe mgbaàmà testosterone dị ala.
Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ ma ọ bụ ghara ịṅụ ọgwụ dịka usoro, ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ kwụsị ọrụ kpamkpam. Ọ bụ n'ihi na iji ọgwụ ọjọọ arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ụfọdụ ego ga-adị na ahụ mgbe niile. Ikwesighi iwepubiga anya na nchikota iji dochie ogwu ajuju. Ọ nwere ike ịkpata mmetụta dị egwu. A gwara gị ka ị kpọọ dọkịta gị ma gwa ya oge ikpeazụ ị gbanyero testosterone cypionate. Ọ / ya ga - enyere gị aka ibute usoro nhazi oge ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere nkwụsị nke Testosterone nke pụtara na ị ga-enwe nsogbu dị egwu nke ọgwụ a n'ime ahụ gị. Ihe mgbaàmà ya nwere ike ịgụnye:
A isi ọwụwa
Mbelata na ọnụ ọgụgụ mkpụrụ
Ị nwere ike ịnweta mmepụta nke na-anọ ogologo oge karịa nkịtị
Ị nwere ike ịnwe mmezi mgbe niile
Gynecomastia (oke okpukpu obi)
Ọkụ na ihe mgbu na saịtị ahụ ịgbawa
Ọ bụrụ na i chee na ị nara Testosterone Cypionate nke ukwuu, gwa dọkịta gị ma ọ bụ ebe ọ bụla na-elekọta nsị. Ọ bụrụ na mgbaàmà gị dị oke, gaa ozugbo na ụlọ mberede.
Esi mara ma ọ bụrụ na ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ - Ị nwere ike ịchọ ịma ma ọgwụ ị na-aga na-arụ ọrụ. Ị ga-achọpụta na mgbaàmà nke testosterone dị ala abaala.
Nlekọta nke Testo Cypionate
Iji zere nsogbu ndị ọzọ mgbe ị na Testosterone, ịkwesịrị ịgwa dọkịta gị ka o nwee ike ịgwa gị ma ịkwesịrị iji ọgwụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịjụ onye dọkịta gị mgbe niile ka ị ghọtakwuo ọgwụ a. Kedu ihe ị ga-agwa dọkịta gị tupu ị nweta ọgwụ ogwu Testosterone Cypionate?
Mee ka dọkịta mara ma ọ bụrụ na ọgwụ a ma ọ bụ ihe ọ bụla na-ezigara gị nwere ike inwe nfụkasị. Ihe dị mkpa nke a bụ na ọgwụ nwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ị nwere ike ịbụ nfụkasị.
Onye dọkịta kwesịkwara ịma banyere akụkọ nlekọta ahụike gị dịka, ma ọ bụrụ na ị na - arịa ọrịa shuga, ụbụrụ ụra, nnukwu prostate, cancer (cancer prostate, ọrịa ara ure na ụmụ nwoke), ọbara mgbali elu, cholesterol dị elu, nsogbu akụrụ, imeju nsogbu, ọrịa strok, ọrịa obi (dịka nkụchi obi, obi mgbu na obi obi) na ọbara na-etinye aka na ngụgụ na ụkwụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọgwụ a nwere ike belata shuga shuga gị. Iji nwee udo nke uche, jide n'aka na ị na-enyocha ọbara shuga gị mgbe ọ bụla a gwara ya ka onye dọkịta mara ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla nke ọbara shuga dị ala dị ka ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ aka, nhụju anya, ọhụụ na-ahụ anya, agụụ, obi ọkụ, ịma jijiji, ma ọ bụ mberede na-agwa dọkịta gị ozugbo. Iji gbochie nke a, dọkịta gị nwere ike ime mgbanwe na nri gị, usoro mmega ahụ, na ọgwụ shuga.
Tụkwasị na nke a, Testosterone Cypionate nwere ike imetụta cholesterol gị na-eme ka ohere ọbara dị (ọrịa akwara ọbara na-akpata ọrịa) na nsogbu obi. Ihe kasị dịrị nchebe bụ ka dọkịta nyochaa ọkwa cholesterol gị nke ọma.
Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịga ije ma ọ bụ buru ụra ruo ogologo oge mgbe ị na-eji Testosterone Cypionate. Iji gbochie nsogbu, ị ga-ahụ ọkwa ọkwa calcium ọbara gị mgbe niile. Ọ bụrụ na ị na-amalite ịwa ahụ n'oge na-adịghị anya, ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta banyere ọgwụ niile ị na-eji n'oge ahụ. Ọ ghaghị ịgụnye mkpụrụ ọgwụ niile, ọgwụ ndị na-edeghị ọgwụ, na ọgwụ ọgwụ.
Mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe na obere gị, a ghaghị ịkpachara anya dị ukwuu n'ihi na ọ nwere ike imetụta ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-egbochi onye toro eto n'ogologo. Mgbe ị na-agwọ ọrịa, i kwesịrị ileba anya na ọganihu nke ọkpụkpụ nwa gị. E kwesịkwara ịdọ aka ná ntị mgbe ndị toworo eto nọ na ọgwụgwọ a n'ihi na ha na-enwe mmetụta dị nro na mmetụta ya dịka nchapu ogwe aka na ụkwụ, nsogbu imeju / prostate.
Ihe mgbu nke ime ọpụpụ dị oke, na ebe ọ bụ na ọgwụ a nwere ike imetụta afọ ime gị, a gwara gị ka ị nọrọ na ya ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya. Tụlee iji usoro ọmụmụ ịmụ anya dịka mkpụrụ ọgwụ akara ma ọ bụ condom iji zere ịtụrụ ime mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a. Gịnị ma ọ bụrụ na ọ na-eme na mberede? Mee ka dọkịta gị mara banyere ya ozugbo.
Enweghi nkwenye ma ọ bụrụ na ọgwụ a nwere ike ịgafe mmiri ara ehi. Otú ọ dị, ọ maara na ọ nwere ike imetụta mmepụta mmiri ara ehi na-eweta nsogbu nye nwa ọhụrụ. Iji zere nsogbu ọ bụla, anaghị eji ọgwụ a eme ihe mgbe ị na-enye nwa ara. I kwesịkwara ịchọ ndụmọdụ dọkịta tupu ị mụọ nwa.
Otu esi agba Testosterone Cypionate
Ịgba onwe gị nwere ike ịdọrọ dị ka ọrụ siri ike, ma ozugbo ị ghọtara otú e si mee ya, ị ga-enwe ekele maka eziokwu ahụ na ọ dịghị uru nchegbu ọ bụla bara uru. Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike ịjụ onwe gị; ebee ka m ga-amalite? Bụrụ nwayọọ, ngwa ngwa na iku ume. Nke a bụ ihe ị ga-eme:
Jide n'aka na ị nwere usoro ọgwụgwọ ziri ezi nke Testosterone Cypionate- Counter check na ị nwere ezi usoro onu ọgwụ a tupu ịnye ọgwụ.
Nweta agịga kwesịrị ekwesị, agịga kwesịrị ekwesị na sirinji- Iji nwee ọgwụ ogwu Testosterone Cypionate; a gwara gị na ị na-eji agịga na-enweghị isi na-ejighị ya n'oge gara aga. Jiri mgbe ọ bụla dị ọcha ma tinye oge ọ bụla ịchọrọ ịṅụ ọgwụ. Okwesiri imata na Testosterone Cypionate dị nwayọ ma bụrụ nke nwere ike, ya mere, ị ga - eji nnukwu agịga dọpụta ọgwụ. Mkpa dị arọ na-egbu mgbu iji gbochie nke a; ị nwere ike dochie ya na onye na-edozi ahụ otu ugboro oge iji nye ọgwụ ahụ. Biko rịba ama na ọ bụrụ na agịga ma ọ bụ sirinji tụlee, ọ dịghịzi edozi ya ma ị nwetaghị nhọrọ ọzọ karịa ịtụfu ya.
Kpochapụ aka gị nke ọma ma tinyekwa gloves na-adịghị mma - Ntucha aka nhicha na-egbochi gị ịrịa ọrịa, ọ bụrụ na mgbatị gị na-ejikọta ihe ọ bụla ma ọ bụ n'elu nke na-adịghị edozi, ị kwesịrị iji dochie ha.
Detuo ikike kwesịrị ekwesị- Iji mee nke a iji banye ikuku n'ime karama ahụ iji bulie ikuku ikuku n'ime. Uru nke a bụ na ị nwere ike ịbịaru ọgwụ a ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ bụ ọkpụkpụ. Ị nwere ike weghachite karama ahụ ma nweta kpọmkwem usoro ọgwụgwọ ị chọrọ.
Ugbu a gaa na obere mkpịsị ụkwụ-Ọ dịghị mkpa ido onwe gị n'okpuru oké ihe mgbu mgbe enwere ihe ị nwere ike ime iji mee ka usoro ahụ bụrụ ihe na-adịghị mma. Iji jide n'aka na ọgwụ ahụ anaghị ebute ka ị na-eme nke a, jigide mkpịsị akaịlị, dọpụta ikuku ma wepụ ya. Jiri aka aka ma dochie ya. Ọ ghaghị ịbụ ihe na-adịghị ize ndụ na eji ya eme ihe.
Aspirate the syringe-Mgbe ọ na-abịa injections, ọ bụla ikuku na-aba n'ime ahụ nwere ike ịkpata nsogbu siri ike. Iji hụ na nke a adịghị eme, ịkwesịrị ịchọrọ. Ihe ị na-eme bụ ijide sirinji nke na-egosi na agịga uncapped. Lezie anya maka ihe ọ bụla ikuku nke nwere ike ịbụ na sirinji. Pịgharịa n'akụkụ iji mee ka ha gaa n'elu. Ozugbo ị hụ na ọgwụ ahụ na-ere n'efu, mee ka ikuku pụọ. Iji mara na ọ dịcha, chere maka nkedo nke ngwọta ka ị si n'osisi sirinji pụta. Lezie anya mgbe ị na-eme nke a iji zere ịwụfu n'ala.
Kwadebe ebe a na-aṅụ ọgwụ-A ghaghị inye ọgwụ a n'elu akụkụ mpụta ma ọ bụ mpaghara azụ nke apata ụkwụ. Ndị a abụghị nanị ebe a pụrụ inye ọgwụ ogwu, ma ha bụ ndị nkịtị. Jiri mmanya na-abaghị uru iji kpochapụ ebe ahụ. Site n'ime nke a, nje bacteria enweghị ebe ọ bụla na akpụkpọ gị, ọ na-egbochikwa ọrịa. Iji zere imebi arịa ọbara ma ọ bụ irighiri akwara, họta saịtị na-agba ogwu nke dị n'èzí n'èzí nke njedebe.
Inject - Na-atụ egwu otú e si agbara Testosterone? Jide sirinji nwere ọgwụ 90 ọgwụ ọjọọ n'elu ebe a na-achọ ịgwọ ọrịa. Mee ngwa ngwa na ya ma wepụ ya. Ọ bụrụ na ị hụrụ ọbara ọ bụla n'ime sirinji nke pụtara na ị merụrụ ahụ. Gaa ebe ọzọ kwesịrị ekwesị ma gbanye ọgwụ ahụ ngwa ngwa. Nwee obi erughị ala ma ọ bụ ihe mgbu bụ nkịtị ma ọ bụrụ na ihe ngbu ahụ bụ ịkwụsị ya ma kpọtụrụ dọkịta ozugbo.
Na-elekọta ebe ogwu ahụ ozugbo i wepụrụ agịga ahụ. Iji mee nke a n'ụzọ dị irè, lelee ntinye ntinye nke nkedo ma tinye bọmbụ ọcha. Kpochapụ ihe niile a na-eji eme ihe na sringes kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị nwere mmerụ ọ bụla, ọbara ọbara ma ọ bụ nkasi obi, kpọtụrụ onye dọkịta ozugbo.
Olee otú nchekwa testosterone Cypionate
Ekwesịrị ịchekwa Testosterone Cypionate na 20 ruo 25 ogo Celsius. Tinyekwa ya na ìhè, mmiri, na ikpo ọkụ. Jide ọgwụ niile ka ụmụaka ghara igbochi nsị. Ozugbo ọgwụ na-agwụ, tụfuo ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Zere ịmalite ịṅụ ọgwụ a ma ọ bụ wụsa ya na sink ka o nwere ike ịbụ ihe na-emerụ ahụ.
Ntuziaka ime Testosterone Cypionate site na steroid ntụ ntụ
Mmasị na-eme Testosterone Cypionate? Ezi ntụziaka ndị a ga-enye gị ihe ị chọrọ.
1. Nnyocha nke 5gram nke Cypionate na 20ml na 250mg / ml
5Gm nke ule nyocha
1ml nke Benzyl mmanya na-egbu egbu nke yiri 5% BA
25 ml nke mmanụ sesame
18 / 20 nkwụnye nlele
Ihe ntanye na-adịghị ọcha
Ihe a ga-eme:
Gwa 5 grams nke ntụ ntụ
Tinye ntụ ntụ na vial ahụ
Tinye BA na vial
Tinye mmanụ na oven ma kpoo ya. Ọ na-enye aka na-edozi ya. Kpoo ihe kariri ihe di gi mkpa ka i wee nwee ike inwe ihe zuru ezu na pan.
Tinye mmanụ n'ime vial ma zọpụta 2ml maka oge. Jiri nwayọọ gwuo ya.
Ị nwere ike ikpo ngwakọta ma ọ bụrụ na-amasị gị. Ị nwere ike tinye ya na pan frying ma ọ bụ anya nke stovu ahụ.
Were ihe nkwụnye ntanetị 18 ma ọ bụ 20 ma tinye ya na vial ahụ. Ọzọkwa, gbakwunye ihe nkedo nke Whatman.
Iji mee ka nrụgide ahụ kwụsị, tinye ogige ọzọ na vial na-adịghị ọcha.
Iji sirinji wepụta ihe ngwọta ma mee ya site na nhazi nke Whatman.
Were 2ml mmanụ nke dị na syringe ọzọ ma mee ihe Whatman n'ime ngwọta.
2. Nnwale Cypionate 10 gram conversion 40 ml na 250mg / ml
Ihe ị chọrọ:
5 ml nke mmanụ sesame
2ml nke Benzyl Mmanya = 5% BA
10 grams nke ule cyp
3cc na 5 / 10cc syringes
3. 60ml na 250mg kwa ml
8 ml nke 5% BA
7 milliliter nke grapeseed mmanụ
15 grams nke ule Cypionate Powder
4. 250 ml na 80mg kwa ml
185 ml nke mmanụ grapeseed
45mls nke Benzyl Benzoate
5ml nke Benzyl mmanya na-aba n'anya
20 grams nke Testosterone Cyp Powder
250 ml na 200mg kwa ml
5ml nke mmanụ mkpụrụ vaịn
45 ml nke Benzyl Benzoate
50G nke Testosterone cyp ntụ ntụ
5. 100ml na 250mg kwa ml
25 ml nke mkpụrụ osisi greepu
2ml nke Benzyl mmanya na-aba n'anya
75 ml nke 25g Testosterone cyp Powder
Otu esi eme Testosterone Cypionate si raw steroid powders
Ị nwere ike ịzụta ịzụta steroid raw raw na-eme ka emechara Testosterone onwe gị. Anyị ga-akụziri gị otu esi eme testosterone Cypionate ntụ ntụ.
Onye ọ bụla na-igwe nri nke 100 mg kwa ngwọta ngwọta nwere:
100 mg nke Testosterone Cypionate ntụ ntụ
1 milliliter nke Benzyl benzoate
736 mg mmanụ mmanụ mkpụrụ
45 mg nke mmanya Benzyl
Nchịkọta ọnụọgụgụ nke nwere ike ịlele 0.01g
A na-eme ka ntụgharị 22um na-enweghị isi
Vial a na-egbuke egbuke bụ nke ọ bụla
Mgbu nke ọ bụla
Nzọụkwụ mbụ bụ ịtụle Testosterone Cypionate dị mkpa ma tinye ya n'ime beaker iko. Tinye Benzyl Benzoate na Benzyl mmanya na-aba n'anya.
Ihe nkwụsị ahụ na-amalite ịsachapu ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị usoro ahụ, ịnwere ike iji mmiri bat. Tinye mmiri ahụ n'ime obere mmiri na pan ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ kwesịrị ekwesị. Ejila mmiri na-ekpo ọkụ n'ihi na ụfọdụ ngwaahịa nwere ike oxidise. Mkpụrụ mmanụ ụgbọelu ị bu n'obi iji mee ihe kwesịrị ịdị ka mmiri ahụ dịka ihe ngwọta ya ma ọ bụrụ na ị kpebie ikpo ọkụ ahụ, ọ ga-adịkwa ọkụ ka mmanụ ụgbọ ahụ dị ọkụ. Ihe mere ị ga-eji mee nke a bụ iji hụ na ntụ ntụ niile na-agbanye n'ime ihe mgbaze ahụ. Gbaa mbọ hụ na enweghi uzu a na-ahụ anya na ngwọta.
Were mmanụ na-acha mmanụ ọkụ na-edozi ahụ. Na-eri nri nke ọma ma hụ na enweghi swirls mmiri ma ọ bụrụ na ọ na-eme, wepụ ihe ngwọta ahụ pụọ na mmiri bat ma mee ya n 'usoro nhazi.
Nzọụkwụ ọzọ na-eji sirinji iji dozie ihe ngwọta ị ga-eji dozie ya. Ịnwere ike iji nnukwu sirinji otu ugboro ma ọ bụ obere sirinji ugboro ugboro. Wepu ihe ntanetị syringe nke 0.22 na-esi na snoetụ ma na-agbazi agịga akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ime obere akụkụ ma tinye sirinji ahụ.
Jiri mmanya na-egbu mmanya ka ehichaa akụkụ nke elu nke vial ahụ. Tinye mkpịsị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ya ma tinye ebe nkedo na ntanye sirinji n'ime vial.
Mgbe ụfọdụ, ịnwere ike chọpụta na nza nwere ike igbochi ma ọ bụ usoro ahụ nwere ike ibelata. Na nke a, ị nwere ike ịmegharị ntụgharị ahụ na onye ọzọ iji chekwaa oge. Ụdị na ọnụ ọgụgụ nke steroid ntụpọ ị na-eji bụ ihe na-ekpebi oge ole usoro ahụ na-ewe.
Ngwaahịa a dị njikere iji ya mgbe ị nyochara ngwaahịa ahụ na vial na-adịghị ọcha.
Testosterone Cypionate nyocha
Ị nụla banyere Nyocha Testosterone Cypionate? Ahịa a kachasị mma ma ọ bụrụ na i chebeghị echiche, ị nwere ike ịtụle ịgụ ntụle ndị a.
Yuan na-ekwu "Ebe ọ bụ na m malitere ọgwụ a n'afọ gara aga, achọpụtawo m uru dị ukwuu na mgbatị ahụ. Enweghi m ike ịhụ na nke a emeela ka m hụ mgbatị ahụ karịa ".
Li na-ekwu na ọ dịghị mgbe ọ na-arahụ ịga mgbatị ahụ. O nwere ike ịga maka mgbatị kwa ụbọchị n'enweghị ike gwụrụ nkịta. Kwa ụbọchị mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ na-aga mgbatị ahụ ma na-arụ ọrụ dị oke oge ọ bụla ọ dị ka.
Chen na-agbanye 200 mg kwa izu abụọ ebe dọkịta nyere ya iwu. Ọ na - ekwu, sị "Ugbu a, m nọ n'okporo ụzọ dị mma na - enweta ahụ ike ma na - efulata. N'ihi ọgwụ a, ana m eche ugbu a dika nwoke ".
Testosterone Cypionate ego
Ugbu a na ị maara ihe ngwaahịa a nwere ike imere gị, ị nwere ike ịchọ ịma ego Testosterone Cypionate. Ya mere ole ka Testosterone Cypionate na-efu? Ọ dabere na nnukwu ị chọrọ na usoro ọgwụgwọ gị.
O nwekwara ike ịdị iche na ụlọ ahịa dị iche iche dabere na ọnọdụ ahụ.
Esi zụta Testosterone Cypionate online
Ị nwere ike ịzụta Testosterone Cypionate site na pịa nke òké. Ọ na-abịa na ọtụtụ uru gụnyere mma. Nke a bụ ihe ị ga - eme;
Chọọ maka weebụsaịtị AASraw.com
Chọọ okwu ahụ "testosterone cypionate."
Dejupụta ngwa ngwa maka ịzụta ma nyefee ya. Ọ ga-agụnye ọtụtụ na ọnọdụ gị.
Enwere ike ịchọrọ gị ka ị jụọ ajụjụ ọnụ ọgụgụ dị nkenke iji chọpụta na ị ruru eru ịzụta ngwaahịa ahụ. Ị nwere ike ngwa ngwa jupụta ma debe ya. Onye ọkachamara anyị ga-atụle ya ma eleghị anya ịnakwere iwu gị.
Ozugbo anabatara iwu gị, ị nwere ike ugbu a ịkwụ ụgwọ site na iji ụzọ kachasị mfe, ma mgbe ọ zuru oke, a na-ezigara ngwa ahụ ozugbo. Ọnọdụ gị ga-ekpebi oge ole ngwaahịa ga-aga.
N'eziokwu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwè njem gị, nke a bụ ezigbo ihe. Ị gaghị akwa ụta maka ịhọrọ ụzọ a ebe ọ bụ na uru ndị a enweghị atụ. Ị nwere ike ịkwụsị ịchọrọ steroid ọzọ n'ihi na ị chọpụtalarị onye ike ya n'ahịa.
Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike iri ihe ọ bụla ịchọrọ n'ejighị egwu nke inwe nchekwa nchekwa. Ahụ gị ga-agbanwe, ị ga-emezikwa oke ozu gị. Ị ga-achọ obere ọzụzụ iji nweta ahụ ị hụrụ n'anya mgbe niile.
Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere mgbake gị mgbe ị gbasịrị mgbatị. Ọ bụ n'ihi na ngwaahịa a ga-eme ka nkwonkwo nitrogen na njikọ protein pụta. Ọzọkwa, ị ga - enwekwu mkpali, ma ọ bụrụ na nke a abụrụ gị nsogbu, ị nwere ike ugbu a nwere ike ịmalite ịmalite ọzụzụ gị ọzọ.
Testosterone Cypionate adịghị ekwe nkwa ime ka ị mara mma, ma ọ ga-enyere gị aka imezu ihe mgbaru ahụ nke ga - enyere gị aka inweta mmeri na trophies.
N'ime ụlọ ọrụ anyị, anyị na-eme ka ndị mmadụ dị iche iche dị iche iche. Ahụmahụ ọkachamara, ọzụzụ dị mma, na arụmọrụ dị egwu ha nwere bụ ihe na-akpata ọganihu anyị. Dị ka ụlọ ọrụ, anyị na-atụ anya ịzụlite mmepe ha site na ọzụzụ mgbe niile. Anyị na-enyekwa ha ngwaọrụ zuru oke maka nkwurịta okwu ka ha wee nwekwuo mmụọ, ntinye, na ịrụ ọrụ.
Anyị na-enye ezigbo ngwaahịa ngwaahịa na a asọmpi ọnụahịa. Ngwaahịa anyị dị ọcha, ị ga-ejidekwa n'aka na arụmọrụ ha adịghị mma. Enwere ike site n'eziokwu na anyị na-eji ngwá ọrụ kachasị mma n'ime usoro mmepụta anyị niile. N'oge mmepụta, anyị na-agbaso ụkpụrụ niile na nlezianya dị mma iji hụ na anyị na-enye ngwaahịa ndị na-egbo mkpa ndị ahịa anyị.
Anyị na-eme mgbalị ọ bụla iji mee ka gburugburu ebe obibi anyị dị ọcha site n'ịhụ na ọrụ anyị na-arụ agaghị emetụta ya n'ụzọ dị njọ. N'ikpeazụ, ndị ahịa anyị bụ ọkpụkpụ anyị. Ọrụ ahịa anyị dị ezigbo mma ma na-ege onye ahịa ọ bụla ntị. Ihe ọzọ na-eme ka anyị dị iche site na ndị ọzọ na-enye ọrụ bụ na anyị na-eji nlezianya azaghachi ndị ahịa. Bụrụ onye mkpesa ma ọ bụ nkwenye; A na-anabata olu gị mgbe niile.
Kwado anyị taa ma nweta ozi ọma anyị. Ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ngwaahịa gị n'oge na-adịghị anya ma ha ga-enweta ọrụ ahụ maka gị.
Ụkpụrụ na Omume nke Endocrinology na Metabolism, nke Kenneth L. Becker dere site na 1189-1893
Testosterone: Action, Enweghị, Ndozi, edeziri E. Nieschlag, HM Behre 272-317
Williams Textbook nke Endocrinology, Site Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, peeji nke 758-766
Kedu otutu 4-DHEA na-agbanwe na Testosterone?
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Sunifiram	Ihe 10 ị ga-ama tupu gị ewere DMAA